सप्तरी-तीन पुस्तादेखि मुआब्जाका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका कोशी कटान पीडितले आजदेखि सप्तरी र सुनसरीको सीमामा रहेको कोशी ब्यारेजमा रिले अनशन शुरु गरेका छन् । नेपाल–भारत कोशी सम्झौताअनुसार कोशीको कटानमा परी सयौँ बिघा जग्गा गुमाएकाले मुआब्जा र क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउन माग गर्दै रिले अनशन शुरु गरेका हुन् ।
कोशी नदी कटान डुबान पीडित सङ्घर्ष समितिको अगुवाइमा आन्दोलनमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीले सप्तकोशी ब्यारेजमा आमसभा गरेपश्चात् रिले अनशन शुरु गरे । रिले अनशनको शुरुआत गर्दै आज पहिलो दिन कोशी नदी कटान डुबान पीडित सङ्घर्ष समिति सप्तरी, सुनसरी उदयपुरका संयोजक महिदेवप्रसाद चौधरी, संविधानसभाका पूर्वसदस्य मानपुर चौधरी, उमेश मिश्र, घनश्याम झा, विजय यादव, झवर राम, वीरेन्द्ररामलगायत ११ जना रिले अनशनमा बस्नुभएको छ ।
साताको शेयर बजार : १ अर्ब ५६ करोडको कारोबार
धर्मको राजनीतिक बहस : आवश्यकता कि आत्मरति ? पूरा पढ्नुहोस
योगेशविरुद्ध होहल्लापछि प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले लेखे: बताउँछौं नि पञ्चायत कस्तो हुन्थ्यो ! काठमाडौं – संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईविरुद्ध शनिवार साँझ नेपालगञ्ज विमानस्थलमा भएको हुलहुज्जतलाई लिएर सामाजिक सञ्जाल तातेको छ । मन्त्री भट्टराईका क...
अवैध चरेस, गाँजा र कारसहित ५ जना पक्राउ
सागका लागि आर्चरीको खेलाडी छनोट शुरू
यस्ता छन् दैनिक स्याउ खानुका फाइदा
अंगीकृत नागरिकतामा झन् उल्झन, अब के हुन्छ ?